Saraakiisha ciidamada Buuhoodle oo wacyigelin nabadgelyo ku tegey Waqooyiga gobolka Cayn ( Dhegayso). – Radio Daljir
Diseembar 20, 2012 8:36 b 0
Buuhoodle, Dec 20, Saraakiisha Ciidamada Madaafiicda ee deegaanka Buuhoodle ayaa safaro kormeera ku tagay deegaano labadii sano ee lasoo dhaafay ay ka dhaceen dagaalo u dhexeeya dadka deegaanka iyo Maamulka Somaliland kuwaasoo xiligan si nabad ah ay ku daaqaan dadka reer guuraaga ah ee gobolka Cayn.
Deegaanada ay saraakiishani booqdeen waxaa kamid ah ?Hagoogane, Maygaagle, Sool-Joogto, iyo Horufadhi, Waxaana ujeedada safarkoooda ay ku sheegeen wacyigelin ay bulshada ku baraarujinayaan sidii ay uga dhaqayn lahaayeen nabadgelyada iyo xasiloonidda deegaanka.
Intii ay ku guda jireen socdaalkooda waxay deegaanadaasi kula kulmeen Odayaasha dhaqanka iyo Wax ku oolka deegaanadaasi kuwaasoo ay kala hadleen sidii nabad gelyada looga shaqayn lahaa.
Waxay ?ku baaqeen inay si wada jir ah uga hortagaan cid kasta oo loo arko inay nabadgelyada xiligan jirta xumaynayso.
Kabtan Maxamed Sh Cabdi Dabcasar oo loo yaqaano Tuur oo kamid ahaa saraakiishii safarka ku jirtey ayaa dadweyne fara badan kula hadlay Gobabka tuuladda Hagoogane oo kamid ah meelaha ay booqdeen saraakiisha ciidamada ee gobolka Cayn.
Tuur ayaa ugu baaqay dadka deegaanka inay ilaaliyaan nabadgelyada oo uu ku sheegay mid aan ciyaar ku imaan ee dhiig badan u daatay isagoo intaa ku daray inaan loo baahnayn in ciyaar lagu burburiyo nabadaasi.
“Waxaan socdaal kusoo maray Hagoogane, Kalshaale, Sool-Joogto iyo halkan aan hada joogno oo ah Maygaagle, dhulkaas aan soo maray xooluhu dheegay isku hayeen dadka reer aan Ciir lu’lanayn ma jirin, waxaasi waxay ku yimadeen dhiig rag marka waxaa loo baahan yahay inaad ilaashataan nabadgelyadaas oo aydaan cidna ka ogolaan in la idinkaga ciyaaro,” ayuu yiri Kabtan Maxamed Sh Cabdi Dabcasar.
Cabdifataax Kiisdiid oo ah taliyaha ciidamada Madaafiicda ee gobolka Cayn oo isna halkaasi ka hadlay ayaa wax lagu farxo ku tilmaamay in deegaanadaasi ay xiligan ?ka dhalatay nabad iyo xasilooni, Wuxuu sheegay inay jiraan dad xasiloonidaasi burburinaya kuwaasoo uu ku baaqay in laga hortago.
Sidoo kale Cabdiraxmaan Cabdilaahi Axmed Nuur ( Afwyne ) oo kamid ah saraakiishii safarka ku tegey deegaanada Waqooyi ee gobolka Cayn ayaa bulshada gobolka Cayn ugu baaqay inay ka shaqeeyaan nabadgelyada iyo xasiloonida deegaanadoodda.
Geesta kale Odayaasha, Waxgaradka iyo qaybaha bulshada ee ku dhaqan deegaanada Hagoogane, Maygaagle, Sool-Joogto, iyo Horufadhi ayaa si weyn usoo dhoweeyey wacyigelinta nabada ah ee ay usameeyeen Saraakiisha Ciidamada ee gobolka Cayn, Waxaana ay halkaasi ka balan qaadeen inay ka hor tagi doonaan wax kasta oo lid ku ah nabadgelyada deegaanadaasi.
Kormeerkan ay sameeyeen saraakiisha Ciidamada ee gobolka Cayn ayaa ah kii u horeeyey oo noociisa ah oo ay sameeyaan saraakiisha Buuhoodle ee dhanka ciidamada, Waxaana safarkoodu kusoo dhamaaday is afgarasho dhexmartay saraakiisha iyo dadka deegaanada ay booqdeen kuwaasoo ay isku afgarteen ilaalinta nabadgelyadda gobolka.